बराललाई नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतको सम्मान- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान, बेलायतले यस वर्षको ‘प्रतिभा सम्मान’ गीतकार कृष्णहरि बराललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै ‘प्रतिभा पुरस्कार’ भने युवा संगीतकार गणेश गुरुङलाई प्रदान गर्ने भएको छ ।
हालै प्रतिष्ठानका गरेको भर्चुअल बैठकले बराल र गुरुङलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बराल र गुरुङले ताम्रपत्र र दोसल्लासहित क्रमश: ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठानका महासचिव देवेन्द्र खेरेसले बताए ।
बरालका दर्जनौं गीत तथा गजलहरु चर्चित र लोकप्रिय छन् । उनलाई नेपाली गीत तथा गजलका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएबापत ‘प्रतिभा सम्मान’ प्रदान गरिने भएको हो । यसै गरी गुरुङले सयभन्दा बढी गीतहरूमा संगीत संयोजन गरेका छन् भने उनको सयकै हाराहारी एल्बममा संगीत समेत रहेको छ । गुरुङलाई संगीत सिर्जना तथा एरेन्जका साथै संगीत प्रशिक्षणसमेत गरेर नेपाली गीतसंगीत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएबापत ‘प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान गरिने भएको हो ।
सन् २००८ मा बेलायतमा स्थापित यस संस्थाबाट हालसम्म स्व. ईश्वर मानन्धर, स्व. अम्बर गुरुङ, जीवी लुगुन, भक्तराज आचार्य, गोविन्दराज भट्टराई, बूाद राना लगायतका स्रष्टाहरु सम्मानित भइसकेका छन् । यसै गरी ‘प्रतिभा पुरस्कार’बाट हालसम्म नवीन विभास, कुवेर राई, उपेन्द्र सुब्बा, श्रवण मुकारुङ, मोमिला जोशी, विमला तुम्खेवा लगायतका व्यक्तित्वहरु पुरस्कृत भइसकेका छन् ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ११:५१
‘एप्रोच’ सडक नबन्दा पुल प्रयोगविहीन
पर्सा — पुल निर्माण भएको झन्डै साढे ४ वर्ष बित्दा पनि ठोरीस्थित ठुटे खोलामा एप्रोच सडक निर्माण हुन सकेको छैन । एप्रोच सडक नहुँदा वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडक खण्ड भएर जाने सवारीसाधन अझै डाइभर्सन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्य छ ।
विवाद समाधान गर्ने प्रयास न त स्थानीय तह न त जिल्लास्तरकै जिम्मेवार निकायबाट भएको छ ।संघीय सरकारले पनि विवाद समाधानको पहल हालसम्म गरेको छैन । ठोरी–२ र ३ को सीमामा पर्ने पुलको पूर्वतर्फ ठुटे खोलाबाट अन्यायपूर्ण तरिकाले कुलो बनाएर भारतमा बढी पानी लगिएको छ । कुलोको समस्या समाधान नहुन्जेल एप्रोच सडक निर्माण तथा त्यसमा कल्भर्ट हालेर हालको कुलोलाई निरन्तरता नदिने अडान केही स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिले लिँदै आएका छन् ।
सीमापारि भिखनाठोरीदेखि सहोदरासम्म भारतीय जनता तथा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू भने हालकै अवस्थाको कुलोलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र कुलोलाई सहज रूपले बग्न दिन पुलको पूर्वतर्फ कल्भर्ट निर्माण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । भारतीय जनतालाई सीमामा क्याम्प खडा गरेर बसेको भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबीले समेत साथ दिँदै आएको छ ।
पहिलो लकडाउनको समयमा ठेकेदार कम्पनीले एप्रोच सडक बनाउन खोज्दा भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबीका जवान आएर त्यहाँ भइरहेको निर्माण कार्यमा अवरोध खडा गरेका थिए । ठोरी गाउँपालिका प्रमुख पीएल श्रेष्ठले हालसम्म सहमति नहुँदा ठुटे खोलाको पुलको एप्रोच सडक तत्काल बन्ने कुनै सम्भावना आफूले नदेखेको बताए ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ११:४०
रंगशालामा शनिबार हुने भनिएको सलमानको कार्यक्रम सर्‍यो
निहारिका र डंगोल पुरस्कृत
सन् २०२२ को 'सामाजिक न्यायका लागि दर्नाल पुरस्कार' घोषणा